AMBOARY NY KAODY TSY METY MIASA AMIN'NY USB 39 - MALEMY
Amboary ny kaody tsy mety miasa amin'ny USB 39
Amboary ny kaody tsy miasa amin'ny kaody USB 39: Raha manandrana mampiasa fitaovana USB ianao toy ny pen drive, keyboard, mouse na kapila madinidinika nefa tsy misy hita ao amin'ny PC-nao dia midika izany fa misy olana amin'ny Port USB anao. Saingy mba hanamarinana fa izany no izy eto, mila manandramana aloha ny fitaovana USB amin'ny PC hafa ianao hanamafisana fa miasa ao amin'io rafitra io izy ireo. Raha vantany vao voamarina fa miasa amin'ny PC hafa ilay fitaovana dia azonao antoka fa tsy mandeha amin'ny PC ny USB ary hahazoana loharanom-baovao misimisy kokoa amin'ny mpitantana ny fitaovana. Hanitatra ny mpanara-maso Bus Serial Universal ary tsindrio ny bokotra ankavanana eo amin'ilay fitaovana izay misy marika fiantsoana mavo eo akaikiny ary safidio Properties. Ao amin'ireo fananana manaraka dia hipoitra ny famaritana lesoka:
Windows dia tsy afaka mameno ny mpamily fitaovana ho an'ity fitaovana ity. Mety ho simba na tsy hita ny mpamily. (Kaody 39)
Ankehitriny ny kaody hadisoana 39 dia midika fa ny mpamily fitaovana dia simba, lany andro na tsy mifanaraka izay ateraka noho ny fisoratana anarana ratsy. Mety hitranga izany raha toa ka nanavao ny Windows ianao na nametraka na namono rindrambaiko USB na mpamily anao. Ka raha tsy mandany fotoana isika dia ndao hojerentsika ny fomba hanamboarana ny kaody tsy miasa amin'ny laoniny USB 39 miaraka amin'ny fanampian'ny torolàlana momba ny famahana olana etsy ambany.
Fomba 1: hamafana ny lakilen'ny fisoratana anarana UpperFilters sy LowerFilters
Fomba 2: havaozy ireo mpamily USB
Fomba 3: Alefaso ny troubleshooter an'ny Hardware sy ny Device
Fomba 4: esory ny Controllers USB
Fomba 5: Atsaharo ary alefaso indray ny mpanara-maso USB
1. Kitiho ny Kitendry Windows + R bokotra hanokatra ny boaty fifampiresahana Run.
2. Karazana regedit ao amin'ny boaty fifampiresahana Run, avy eo tsindrio Enter.
3. Ankehitriny mankanesa any amin'ireto lakilen'ny fisoratana anarana manaraka ireto:
4. Ao amin'ny fikarohana ankavanan'ny pane TopFilters sy ambanyFilters.
Fanamarihana: raha tsy hitanao ireo fidirana ireo dia andramo ny fomba manaraka.
5. Mamafa izy roa ireo. Hamarino tsara fa tsy mamafa ny UpperFilters.bak na LowerFilters.bak ianao dia mamafa fotsiny ny fidirana voatondro.
6.Exit Registry Editor ary avereno indray ny solosaina.
Tokony ho izany angamba Amboary ny kaody tsy mety miasa amin'ny USB 39 raha tsy izany dia tohizo.
1. Kitiho ny Windows Key + R dia soraty devmgmt.msc ary tsindrio Enter raha hanokatra Mpitantana Fitaovana.
2.Expand Universal Controllers Serial Bus avy eo tsindrio havanana ny fitaovana USB misy fiantsoana mavo ary safidio Fanavaozana ny mpamily.
3. Avy eo misafidy Mitadiava rindrambaiko mpamily nohavaozina ho azy.
4. Atsaharo ny PC-nao raha te hitahiry fanovana. Raha mbola mitohy ny olana dia araho ny dingana manaraka.
5.Afidio indray ny rindrambaiko fanavaozana ny mpamily farany fa misafidy izao ' Mikaroha rindrambaiko mpamily. '
6. Manaraka, eo amin'ny farany ambany tsindrio ‘ Avelao aho haka ao amin'ny lisitry ny mpamily misy amin'ny solosainako . '
7. Safidio ny mpamily farany avy amin'ny lisitra ary kitiho ny manaraka.
8.Aoka ireo mpamily hametraka Windows ary hofaranana akaiky ny zava-drehetra.
9. Avereno ny PC-nao mba hitahiry ireo fanovana ary azonao atao ny manamboatra ny kaody tsy miasa amin'ny USB 39.
1.Press Windows Key + X ary kitiho eo Takelaka fikirakirana.
2.Mitadiava troubleshoot ary kitiho ny Fanamboarana.
3. Manaraka, tsindrio eo Jereo daholo amin'ny pane ankavia.
4.Click ary mihazakazaka ny Troubleshooter ho an'ny fitaovana sy fitaovana.
5.Ny Troubleshooter etsy ambony dia mety afaka Amboary ny kaody tsy mety miasa amin'ny USB 39.
1. Kitiho ny Windows Key + R dia soraty devmgmt.msc ary tsindrio Enter raha hanokatra Device Manager.
2.Expand Universal Serial Bus Controller avy eo tsindrio ny bokotra havanana amin'ny fitaovana USB miaraka amin'ny fiantsoana mavo ary safidio esory
3.Raha nangataka fanamafisana dia fidio Eny.
4. Famerenana indray hitehirizana ny fanovana ary hametraka ho azy ireo mpamily default ho an'ny USB i Windows.
2.Expand Universal Controllers Serial Bus ao amin'ny Device Manager.
3. Ankehitriny tsindrio havanana amin'ny voalohany Controller USB ary avy eo tsindrio Esory
4. Avereno ny dingana etsy ambony ho an'ny tsirairay an'ny mpanara-maso USB eo ambany fifehezana Universal Serial Bus.
5. Atsaharo ny PC-nao raha te hitahiry fanovana. Ary aorian'ny famerenana amin'ny laoniny Windows dia hametraka indray rehetra Controller USB fa nesorinao.
6. Zahao ny fitaovana USB hahitana raha miasa na tsia.
Izay no nahombiazanao Amboary ny kaody tsy mety miasa amin'ny USB 39 fa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity torolàlana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
Fifanarahana ip tsy manan-kery eo amin'ny faritra eo an-toerana
fitendry windows 10 vaovao farany tsy mandeha
windows installer module maka CPU
iTunes lesoka 0xe80000a windows 10